I-Twitter isungula ukuqokelelwa kweNFT ngaphandle kokufa kukaHype
Ukuhlaziywa: 1 Julayi 2021
I-Twitter ijoyine uloliwe wethokheni engabonakaliyo (NFT) kwaye ilahle ingqokelela yeNFT ngaphandle kokulahla kutsha nje kwishishini. Ingxilimbela yemidiya yoluntu ibhengeze izolo ukuba iyile i-140 NFT, eya kuthi isasazwe ngokukhululekileyo kubasebenzisi be-140.
Ngelixa ezi tokeni zisimahla, ezisixhenxe zifumene uluhlu kuRarible, iqonga elisekwe e-Ethereum, "Ayithengiswa" disclaimer iqhotyoshelwe. Ngexesha lokushicilela, ixabiso lokubhida leethokheni ezidwelisiweyo limi kwi-1 mETH.
Ubugcisa bedijithali obusandul 'ukwenziwa buquka u-Reply Guy (umntu ongenanto emva kokuchazwa), Vitamin T (Vitamin Twitter), Furry Twitter, twttr jggl, Rare Form, Character Character, kunye no-First Born.
Ukuthetha malunga nophuhliso, iqabane laseCinneamhain Ventures uAdam Cochran wathi "Kubonakala ngathi i-Twitter ekugqibeleni iqaphele ixabiso elithile le-ETH," esongeza ukuba uJack Dorsey "uza kuthi chu afudukele ekubeni yi-crypto maxi ngokubanzi."
Kutshanje, uDorsey ubonakalise umdla obalulekileyo kwishishini le-cryptocurrency kwaye uthe ukushiya i-Square, inkampani yakhe yentlawulo, kunye ne-Twitter yeBitcoin ukuba kukho imfuneko.
Ukukhutshwa kweNgqokelela yeNFT ye-Twitter Ngaba kunokunyusa umdla weNFT kwakhona
Ukuhamba kwe-Twitter ukumilisela ingqokelela yasimahla ye-NFT kuza xa isipha esijikeleze i-NFT bt kwindawo ye-crypto buthathaka. Nangona kunjalo, i-craze inokuphinda ihlaziywe kungekudala, kwaye ezinye ze-Twitter NFTs zinokuthengisa ngeemali ezinkulu, njengangaphambili.
Phakathi kokuphela kuka-2020 kunye no-Epreli 2021, icandelo le-NFT lidibanise utyalo-mali olukhulu, iBeeple ithengisa enye yeeNFTs ezibiza kakhulu nge-69 yezigidi zeedola. Njengokuba ubushushu buye buqina, amanani abantu abadumileyo kunye nosaziwayo baye batsibela kwi-bandwagon ukumilisela ingqokelela yabo okanye ukucebisa iiprojekthi ezinxulumene ne-NFT.
Ukunyuka kwecandelo le-NFT kubangele abaninzi ukuba babuze uzinzo lwecandelo njengoko abanye belithelekisa neentsuku ezindala ze-ICO. Oko kwathethi, iingxelo zibonisa ukuba i-hype ye-NFT inyukile kwaye igqithile kuleyo ye-ICO boom ngo-2017 nango-2018.
tags Cryptocurrency, iindaba, I-NFTS, Twitter